नेपालमा 'युके भेरियन्ट’को जाेखिम बढ्दो, खोपले सुरक्षित गर्नसक्छ - Digital Khabar
२७ चैत, काठमाडौं । विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोभिड–१९ का नयाँ प्रजातीहरू देखिएसँगै नेपालमा पनि ‘म्युटेड’ भाइरसबारे चासो देखिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पछिल्लो समय संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमा ‘युके भेरियन्ट’को लक्षण देखिएको जनाएको छ । यसअघि गत माघमा ३ जनामा ‘युके भेरियन्ट’ देखिएको महाशाखाले पुष्टि गरेको थियो ।
के हो ‘युके भेरियन्ट’ ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनले यी ‘भेरियन्ट’ कोभिड–१९ का नयाँ प्रजातिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । ‘युके भेरियन्ट’ (बी १.१.७) अहिलेसम्म ४१ वटा देशमा फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनकाअुनसार कोभिड–१९ को सामान्य भाइरसभन्दा युके ‘भेरियन्ट’ ७० प्रतिशत बढी संक्रामक रहेको पाइएको छ । मृत्युदरका हिसाबले पनि ‘युके भेरियन्ट’ सामान्यभन्दा घातक भएको उनी बताउँछन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा युके ‘भेरियन्ट’को आशंका गरिएकाहरूको नमुनामा ‘युके भेरियन्ट’ (बी १.१.७) को मात्रा धेरै देखिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनकाअनुसार संक्रमितहरूको नमूनामा ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म ‘एस जिन’ नेगेटिभ देखिएको छ । जुन ‘युके भेरियन्ट’को लक्षण पुष्टि गर्ने नतिजा हो । काठमाडौं र पोखरा क्षेत्रका शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा पनि यो लक्षण देखिएको छ । यस हिसाबले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा पनि यो ‘भेरियन्ट’ देखिने सम्भावना प्रबल रहेको डा. पौडेलको आँकलन छ ।
कसरी हुँदैछ नेपालमा ‘युके भेरियन्ट’को परीक्षण ?
गत माघ ५ गते बेलायतबाट नेपाल आएका तीन जनामा ‘युके भेरियन्ट’ पुष्टि भएको थियो । उनीहरूको स्वाब जिन सिक्वेन्सिङका लागि गत पुष २७ गते हङकङ पठाइएको थियो ।
छिमेकी मुलुके भारतमा पछिल्लो समय युके, ब्राजिलियन र साउथ अफ्रिकन तीनै प्रकारका ‘भेरियन्ट’ देखिएको छ । जसमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएका प्रत्येक १० हजारमध्ये ७ सय जनामा युके ‘भेरियन्ट’ देखिएको तथ्यांक छ । यस हिसाबले नेपालमा ‘युके भेरियन्ट’को जोखिम बढी भएको डा. पुन बताउँछन् । तर अन्य ‘भेरियन्ट’ पनि देखिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । “भाइसरको प्रकृतिअनुसार कुन समयमा यसले रूप परिवर्तन गर्न भन्ने यकिन छैन । त्यसैले अन्य ‘भेरियन्ट’को सम्भावनालाई पनि नकार्न भने सकिँदैन । पछिल्लो समय भारतमा धेरै फैलिएको भनिएको डबल म्युटेड भाइरस स्थानीय रूपमा विकास भएको प्रजाति हो । यो हिसाबले पनि कुन प्रजाति कहाँ देखापर्छ भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन,” डा. पुनले भने ।
नेपालमा लगाइएको खोपले ‘युके भेरियन्ट’लाई रोक्नसक्छ ?
नेपालमा हालसम्म कोभिड–१९ विरुद्धका दुईवटा खोप प्रदान गरिएको छ– भारतको उत्पादन कोभिसिल्ड र चीनको उत्पादन भेरोसेल । जसमध्ये भेरोसेल खोपले नयाँ भाइरसविरुद्ध कसरी काम गर्छ भन्ने अहिले अध्ययनकै क्रममा छ । कोभिसिल्ड खोपले युके ‘भेरियन्ट’विरुद्ध भने प्रतिरोधीको काम गर्ने पुष्टि भइसकेको छ । भारतको इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले गत ३० मार्चमा एक अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै भारतले उन्पादन गरेका दुवै कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोपले ‘युके भेरियन्ट’को संक्रमणबाट बचाउने पुष्टि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री संसद छलेर भाग्न खोजेको कांग्रेसको आरोप